ကိုနေ၀င်း | Myanmar Mp3 Album
Myanmar Mp3 Album Myanmar Mp3, Myanmar Song, Myanmar Music
New Myanmar Albums
Myanmar Mp3, Myanmar Song, Myanmar Music
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ကိုနေ၀င်း
Category Archives: ကိုနေ၀င်း
ကိုနေ၀င်း – ယာဉ်အမီ ရီရီပြုံးပြန်ပါ
အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ရမယ် ခဏလူသား ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကို ကြွေချိန်မသင့်ကြွေတဲ့ပန်းမို့ မရေရာတဲ့လမ်း မန္တလေးမြို့ပန်းတောက်ပွင့်တဲ့ည နေညိုနေပြီ အိုးထိန်းစက်သံသရာ ပျော်တော်စက် စိတ်တူကိုယ်ကွဲ L>ownload Credit : MMCP
July 29, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ကိုနေ၀င်း4Comments
ကိုနေ၀င်း၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခင်မောင်တိုး – မိုးသောက်ခဲ့ပြီ
ငြိမ်းချမ်းမဲ့ခရီး မင်းသိဖို့ပြောခဲ့မယ် ရဲရင့်ခြင်း မပြည့်တဲ့အိုး မိုးသောက်ခဲ့ပြီ ကံအလှည့်သင့်ရင် တစ်ချိန်ကပြောတဲ့စကား မောင့်စိတ်ကူး ပန်းသို့မှာတမ်း လှည့်လည်သူ လောကရဲ့လူ ခွဲခွာချိန်မရှိပြီ ဖြူဖွေးအိပ်တော့မယ် L>ownload Credit : MMCP
July 27, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) စိုင်းထီးဆိုင် ကိုနေ၀င်း ခင်မောင်တိုး 1 Comment
ကိုရဲလွင်၊ ခင်မောင်တိုး၊ ကိုနေ၀င်း – ပန်းပျိုးလက်
သီချင်းလက်ဆင့်ကမ်း မပြင်တော့ဘူး ကြင်နာသူရဲ့အဝေးဆီမှာ မင်းသိပါတယ် အမှတ်တရအဆိပ်တက် နောက်ကွယ်ကလူ ရဲရင့်ခြင်း (၂) ဆောင်းဇာတ်လမ်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ခံတွင်းပျက်နေသူ နူတ်ခွန်းဆက် ပန်းပျိုးလက် အဆုံးမဲ့သီချင်း L>load Credit : MMCP
July 22, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) ကိုရဲလွင် ကိုနေ၀င်း ခင်မောင်တိုး2Comments
ကိုနေ၀င်း – ယိမ်းနွဲ့တဲ့လှိုင်း
ကိုယ့်ဘက်ကဆန္ဒ ချိန်းထားတဲ့နေ့ စဉ်းစားထား ယိမ်းနွဲ့တဲ့လှိုင်း လွှမ်းရတဲ့ညတွေလွန်ပါစေ သင့်ကိုယ်စား ဆုတောင်း ဒေါသနဲ့ရုပ်တရား ရင်ကိုအေးမြရစေသား ပင်ညိုရိပ် နွေရောက်ချိန်နီးပြီအချစ် မိုးမခနွေ သည်ပုံခရီး L>ownload Credit : MMCP
June 19, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ကိုနေ၀င်း Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums3Comments
Snuo Mwoani (296)
ME *MMA* (246)
Yee Wai Aung (193)
sai agag (191)
Tar Yar (140)
htoo htoo (96)
[email protected] (75)
Myanmar All Music Channel (67)
Mad Computerist (63)
Aung Thiha (49)
Myanmar Online Music (46)
ုkam khai (38)
thant zin win (24)
htetar karkyaw (24)
Bran saing (22)
Black Parade (22)
rapunk on Smoky Vibes – JasonR
rapunk on #Rp – JasonR ( feat. Rapunk, Hnin Inzali )
luchaw on ထာဝရအဖော်
zayarminhtun on Help!
aungpyaehein on ချစ်သူပြောသောနွေအကြောင်း
aungpyaehein on တစ်သက်တာအမှတ်တရ
Yee Wai Aung on ကျွန်တော်ကြိုက်သောသီချင်းလေးများ (၄)
zawmin224 on အောင်သူ၏တေးများ
Copyright © 2017 Myanmar Mp3 Album. All Rights Reserved.